Vokatry ny ora-mikija: manambana ny tondra-drano ho an’ny lemak’Antananarivo | NewsMada
Vokatry ny ora-mikija: manambana ny tondra-drano ho an’ny lemak’Antananarivo
Par Taratra sur 17/02/2021
Nikija nandritra ny roa herinandro tsy niato izao ny orana teto Antananarivo. Miteraka fiakaran’ny renirano amin’ny toerana maro izany ary efa mahazo ny filazana miloko mena amin’ny loza mitatao ny lemak’Antananarivo.
Nilaza ny Apipa, omaly, fa mihatra ny filazana miloko mena na loza mitatao amin’ireo kaominina maromaro manodidina an’Antananarivo noho ny fiakaran’ny reniranon’i Sisaony. Mihatra amin’ny kaominina Tsiafahy, Bongatsara, Antanety, Ampahitrosy, Soalandy, Ampanefy, Soavina, Anosizato Andrefana, Ampitatafika, Ambavahaditokana, Fenoarivo, Ambohitrimanjaka, Fiadanana ary Ampangabe ny filazana loza mitatao amin’ny mety hisian’ny fefiloha tondraka na ho vaky noho ny habetsahan’ny ranon’orana mitondra riaka.
Mila mailo, araka izany, ireo kaominina 16 ireo amin’ny fampiakarana amin’ny toerana azo antoka ireo olona manamorona ny fefiloha sy mipetraka amin’ny faritra iva. Torak’izany ny fiarovana ireo biby fiompy sy ny fiarovana ireo taratasim-panjakana saropady ho an’ireo tokantrano voakasika.
Efa maro ireo traboina amin’ireo faritra iva amin’ireo kaominina. Dibo-drano ny trano fonenana, indrindra ireo manamorona ny fefiloha andalovan’ny reniranon’i Sisaony. Fefiky ny rano ny fambolena sy ny tanimbary…
Araka ny tatitra nataon’ny Apipa, omaly tolak’andro, mahatratra 3,73m ny haavon’ny reniranon’i Sisaony eo amin’ny mari-drefin’Ampitatafika. Mbola hiakatra hatrany ny rano ao anatin’ny 12 ora raha ny tombana ka ho tratra ny refy 4 m filaza loza mitatao miloko mena ao anatin’ny 12 ora.
Ho an’ny reniranon’Ikopa, 1,15 m ny haavon’ny rano eo amin’ny mari-drefin’Antelomita. Hitohy ny fiakaran’ny rano. 1,65m kosa ny haavon’Ikopa eo amin’ny mari-drefin’Ambohimanambola. 0,29m ny haavon’ny reniranon’Ikopa eo amin’ny mari-drefin’Anosizato. 2,72m ny haavon’Ikopa eo amin’ny mari-drefin’i Bevomanga. Mbola hitohy ny fiakaran’ny rano ary eo amin’ny 4 m eo ny refy filazana loza manambana miloko mavo.